Pixelmator ကို 3.4 သို့အဆင့်မြှင့်သည် ငါက Mac ပါ
Split View အထောက်အပံ့နှင့်အခြားအရာများထည့်ရန် Pixelmator မွမ်းမံသည်
UAB Pixelmator အဖွဲ့သည်ဒီအက်ပလီကေးရှင်းသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ OS X El Capitan တွင်ထူးခြားထင်ရှားသောအသစ်အဆန်းများထဲမှတစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည် split screen နှင့် power အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ Split View ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင် application နှစ်ခုဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါ multitasking ၌တည်၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအသစ်အဆန်းကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်လိုအပ်သည်မှာထင်ရှားပါသည် ယနေ့ခေတ် Pixelmator ဗားရှင်း 3.4 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည် ဒါပေမယ့်ဒါဝေးကနေအကောင်အထည်ဖော်တစ်ခုတည်းသောမဟုတ်ပါဘူး။ တိုးတက်မှုနှင့်အမှားပြင်ဆင်မှုများနှင့်ခုန်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရမည့်နောက်ထပ်သတင်းများကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအသစ်တစ်ခုမှာ OS X El Capitan တွင်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအမည်ရှိ Apple စာလုံးအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတွင်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ Force Touch ၀ တ်ဆင်ခြင်း option ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည် လျှောက်လွှာကိုယ်နှိုက်နှင့်လျှောက်လွှာအတွက်ရှိပြီးသား tools တွေကို၏အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူတည်းဖြတ်ရန်နှင့်ပြန်လည်ထိတွေ့ရန်အလွန်ကောင်းသော application တစ်ခုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Photoshop ကဲ့သို့သောအစွမ်းထက်သောဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းကိရိယာများကိုမလိုအပ်ပါ။ Pixelmator သည်မည်မျှအစွမ်းထက်သည် ရှုပ်ပွနေစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ရန်.
အကယ်၍ သင်သည်ဤလျှောက်လွှာကို ၀ ယ်ပြီးပြီဆိုလျှင်၊ သင်အသစ်ပြောင်းရန်အသိပေးချက်ကိုကျော်ပြီးသွားပြီ၊ သို့သော်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှမပေါ်လာပါက၎င်းမှသင်ရှာနိုင်သည် အက်ပလီကေးရှင်း - အက်ပလီကေးရှင်း သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက် tab ကိုရိုက်ထည့်ပါ Mac App Store တွင်အသစ်ပြောင်းခြင်းများ.
Pixelmator ဂန္ထဝင်€ 29,99
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac က App Store ကို » Split View အထောက်အပံ့နှင့်အခြားအရာများထည့်ရန် Pixelmator မွမ်းမံသည်
သင့်ရဲ့ hard drive နှင့်ပြင်ပ drives များအတွက်အိုင်ကွန်ကို Mac desktop ပေါ်မှာဘယ်လိုကြည့်မလဲ
OS X မှ iOS9ဖုန်းများ Jailbreak လုပ်နည်း